wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya loo cugay in la gu qabto dalka Turkiga aad baan u ga xumaaday.
Thursday August, 16 2018 - 04:10:57
Monday February 12, 2018 - 11:15:03 in by salman abdi
Dhawr jeerna waaban ka hadlay - waraaqo dhawr ahna dawladdii wakhtigaa waaban u soo diray oo qayaxaya in Turkiga wadahadallo la gu qabtaa aaney dan siyaasadeed iyo qaddiyad ummadeed sinaba ugu jirin.
Waxa aan soo bandhigay wakhtigaa oo aan ku andacoonayey in Turkigu aannu sinaba dhexdhexaad u ga noqoneyn qaddiyadda madaxbannaanida Somaliland afar tudhaale oo Turki u gaar ah awgood;
1. In Turkigu aannu abid noqon karin waddan kala tag labo waddan oo kale ka taliya. Waayo isaga ayaa ammuurtaa mid la nooc ah dhex hawaara oo Kurdistan dabkeedu ku shidan yahay. Sidoo kale in Turkigu midnimo manfac Soomaali u leh na aannu ka talin karin oo aaney dani ugu jirin. Waayo dan qarsoon oo uu Soomaalida ka leeyahay oo dhuuni raacasho, is-ballaadhin iyo amni tabac ah ayaa jira.
2. In aan la ga dhaadhicin doonin Turki xasuuqii weynaa ee umadda tan loo geystay, waayo isaga ayaa mid ka mid ah xasuuqyadii adduunka ugu ba'naa u geystay Armaaniyiinta oo hal milyan iyo badh Armaaniyiin ah oo dumar iyo caruur u badan in uu qudh gooyey dunidu ku eedaysaa.
3. In Turkigu ka mid yahay dalalka aan saxeexin heshiiskii aayo-katashiga dalalka adduunka ee loo yaqaan 'Self-Determination Principle of United Nations Charter One & weliba heshiisyadii adduunyadu gashay wakhtiyadii kala madaxbannaanshiyaha oo loo yaqaa 'Atlantic Charter and the Dumbarton Oaks proposals 1941 midna'. Sidaa darteed, aaya-ka-tashiga Somaliland aannu dhego daloola u yeelan doonin.
4. In Turkigu yahay dal fursad u arka in uu Soomaalida dayrada ah ee cid weliba soo tuftay ka faa'idaysto dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Turkigu marka kan waxa uu eegayaa bogcadda fiican ee dhulka Soomaalidu uu adduunyada kaga yaal; gaar ahaan Berbera iyo Saylac. Sidaa darteed, ma rabo furfurnaanshiyo iyo in ay dawlado Soomaalidu kala noqoto oo wixiisa jumlad ayuu ku rabaa.
Hadda iyo haatan, waxa mar walba wanaagsan in aaney dawladdu hadba dhan u jibboon ee marka hore ay daraasaad weyn ku sameyso dalka ay wadahadallada geyneyso nooca uu siyaasiyan u fekero, sida ay taariikhdiisu ahaan jirtay iyo danta uu Bariga Afrika ka leeyahay inta ay le'eg tahay.
Maanta waxa la leeyahay waa mar kale iyo Jabuuti oo la gu kulmo si nuxurka wadahadalka loo gu sargooyo (Agenda Setting). Jabuuti waa Ismaaciil Cumar Geelle - Ismaaciil Cumar Geelle na waa Jabuuti. Waa ay fududdahay in sir iyo caad hal shakhsi siyaasaddii loo fahmi karo - tolaw Ismaaciil ileen Jabuuti nidaam dawli ah oo isaga dhaafsiisan ma la ha e, jawigiisa wakhtiga kan war badan ma la ga hayaa? Iyana mooyi.
Dhanka kale iyo Switzerland iyana dal ahaan, siyaasad ahaan iyo taariikh ahaan wakhti cid galisay ma jirtaa? Switzerland waxa la yidhaa dalka midnimada adduunka ee aan suuro-galka ahayn suuro-galiyey. Waa dalka leh nidaamka midnimo ee adduunka ugu wanaagsan ee loo yaqaan Swiss Model. Haddii halkaa la aado, Soomaalidu sida loo midoobo ayey ka soo baran doontaa ee ugu wanaagsan amma sida loo kala baxo ee ugu hawsha yar - in ay nasri noqotana waa suuro-gal.
Waxase aad u mihim ah in shacabka Somaliland ay aad u fahmaan qaddiyadda wadahadalka la ga leeyahay ee labada dhinac iyo taariikhda labada ummadood. Waxa jirta nooc midnimo oo Somaliland aad faa'ido ugu leh oo dadka weli aan loo sharxin. Midnimadu ma aha keliya sida la moodayo waxa jira afar nooc oo loo midoobo. Marka loo baahdo afarta nooc aad baan u sharxi doonaa insha allahu.
Mid ka mid ahi waa wax walba kala yeelasho hal waxna wada yeelasho. Haddii wadahadallada halkan la geeyey waxa aan hubaa in ay Somaliland boqol jeer ujeeddadeeda ku guuleysan doonto - waa haddii Somaliland danteeda kunka sano ee soo socda dan la ga leeyahay oo si fiican loo ga fekerayo eh.
Wadahadalladaa labada dhinac fursad mustaqbal oo aad u heer sarreysa ayaa Somaliland mar walba ugu jirta - in se la ga faa'ideysto oo si wacan loo garto iyaba waa xirfad iyo aqoon. Dadka Reer Somaliland waxa la gudboon in hal mid si weyn u fahmaan - waa in Somaliland iyo Soomaaliya ay qasab tahay in ay wax wada yeeshaan marka siyaasadda la gu kala baxo.
Wax wada yeelashadu dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda gudaha ee Somaliland ee hadda iyo mustaqbalka ayey dan u tahay. Haddii siyaasadda la ga heshiiyo wax badan oo wanaagsan oo aynnu iska kaashan karno Soomaaliya ayaa jira. Waase haddii marka hore aan ka heshiinno siyaasadda oo ay Soomaaliya si waadax ah u qirto in Somaliland ay tahay dal iyo waddan ka madaxbannaan. Waa markaa marka Soomaali wax wada yeelan karto.